किरण बिके र सचिन तामाङलाई विनाशर्त रिहा गर्ने क्रामाकपाको माग : अरुण घतानीले गरे देशव्यापी प्रतिरोधको अपिल - खबरम्यागजिन
Homeखबरकिरण बिके र सचिन तामाङलाई विनाशर्त रिहा गर्ने क्रामाकपाको माग : अरुण घतानीले गरे देशव्यापी प्रतिरोधको अपिल
August 26, 2020 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि खबर 0
कालेबुङ, 26 कालेबुङ
गोर्खाल्याण्ड संयुक्त सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष किरण बिके अनि सहसचिव सचिन तामाङलाई हिजो दार्जिलिङ पुलिसको पक्राउ गरेको जिएसएसएसले बताएको छ। पुलिस प्रसासनबाट अहिलेसम्म पक्राउबारे कुनै आधिकारिक वयान दिएको छैऩ।
बलिदान दिवसको छेक पारेर हिजो जिएसएसएसले दार्जिलिङको चौरास्तामा रक्तदान शिविर गरिरहेको थियो। रक्तदान शिविरबाट2बजी उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो।
बताइएको छ, जिएसएसएसले रक्तदान शिविरको लागि प्रशासनलाई अनुमति मागेको थिएन। यद्यपि, अनुमति बिना नै रक्तदान शिविर गरेको वा कोरोना सम्बन्धित ऐन र आचारसंहिता उलङ्घन गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको हो वा पक्राउको कारण अरु नै छ, त्यो अझसम्म खुलेको छैन। जिएसएसएसले भने रक्तदान शिविर गरेकै कारण पक्राउ गरेको बताएको छ।
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमा, गोर्खा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चालगायतले प्रशासनको अनुमति बिना नै साङ्गाठानिक कार्यक्रमहरू गरिरहेकै छ। तर अहिलेसम्म राजनैतिक सङ्गठनका कसैलाई पनि अनुमति बिना नै गतिविधि गरेको आरोपमा वा कोरोना सम्बन्धित ऐन र आचारसंहिता उलङ्घन गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको देखिएको छैन।
भर्खरै गोरामुमोले एकर्ड दिवस पनि पालन गऱ्यो। विनय तामाङ अनि अनित थापा उपस्थितिमा धेरैवटा कार्यक्रमहरू भइरहेकै छ। तर उनीहरूलाई पक्राउ गरेको घटना देखिएको छैन। पुलिस प्रशासनले बिकेलाई पक्राउ गर्नुको कारण खुलाएको छैन। पक्राउ नै गरिएको हो वा अरु कुनै कारणले थाना लगिएको हो, त्यो पनि खुलेको छैन। तर जीएसएसएस प्रवक्ता अञ्जनी शर्माले भने बिके र तामाङलाई पक्राउ नै गरेको बताएकी छन्। उनले दार्जीलिङ पुलिसको पक्राउको विरोध गर्दै शीघ्र नै उनीहरूलाई मुक्त गर्नुपर्ने माग पनि गरेकी छन्। जिएसएसएसकै विनिता लेप्चाले खुलेआम हत्या हुँदा तमाशा हेर्ने प्रशासन , रक्तदान शिविर आयोजित गर्दा पक्राउ गर्ने? भन्दै प्रश्न टाएकी छन्।
क्रामाकपाले गऱ्यो देशव्यापी प्रतिवादको अनुरोध
यता क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीले पनि बिके र तामाङलाई बिना शर्त रिहाई गर्नुपर्ने माग गरेको छ। क्रामाकपाको युवा मोर्चाका महासचिव अरुण घतानीले दुइको पक्राउबारे विभिन्न प्रश्न उठाएका छन्। के रक्तदान शिविर गर्नु अपराध हो ? महादानको पुरस्कार जेल? के जिएसएसएस कुनै प्रतिबन्धित सङ्गठन हो ? के गोर्खाल्याण्ड नामित सङ्गठनहरुनै प्रतिबन्धित छन्? दुर्गा मल्ललाई श्रद्धाञ्जली दिनु राज्यले गैर कानुनी मान्छ ? के किरण बिके आतङ्कवादी हुन् ? दिल्लीमा बसेर भारतीय गोर्खाहरुको हकको निम्ति आवाज उठाउनु गुनाह हो ? हाम्रो देश साच्चै स्वतन्त्र भएको छ ? देशको संविधान र गणतन्त्रको किन अपमान गरिन्छ? भन्नेजस्ता विविध प्रश्न उनले उठाएका छन्।
उनले पुलिसी दमनबारे अब मौन बस्नु नहुने र राज्य सत्ताको‌ दमन कहिलेसम्म सहनुपर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठाएका छन्। दार्जीलिङ्गमा यो निस्सासिदो अवस्थाको मूल अपराधी को हो? भन्ने प्रश्न गर्दै अब सबै जाग्नुपर्ने र यस्ता पक्राउ विरुद्धको प्रतिवाद देशव्यापी गरिनुपर्ने अपिल पनि गरेका छन्।
उनले दुवैलाई पुलिसले भट्टै निशर्त मुक्त गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। उनीअनुसार किरण बिके व्यक्ति होइनन् संस्था हुन्। उनी गोर्खाल्याण्डका सशक्त प्रवक्ता पनि हुन्। गणतान्त्रिक आन्दोलनका सिपाही पनि हुन्। युवाहरुका प्रेरणा पनि हुन्।
बङ्गाल प्रशासनलाई अत्याचार बन्द गर्ने अपिल गर्दै सबैलाई प्रतिवादको निम्ति अघि आइदिने अपिल गरेका छन्।
यता क्रामाकपा प्रवक्ता गोविन्द छेत्रीले सबै गणतान्त्रिक अधिकारलाई मिचेर बङ्गाल प्रशासनले फेरि शुरु गरेको पक्राउ कार्य निन्दनीय रहेको बताएका छन्। उनीअनुसार आउँदो विधानसभा चुनाउअघि राज्य सरकार दार्जीलिङ पहाड़को गोर्खा एकतालाई तोड़्न चाहन्छ। किरण बिकेहरूको पक्राउ यसैको उदाहरण हो। किनभने गोर्खा एकता कायम रह्यो भने बङ्गाल सरकारलाई साह्रो पर्नेछ।
उनले पनि यस्तो बेला सबै दल अघि आएर बोल्नुपर्ने जनाएका छन्। उनीअनुसार सबै गोर्खाको एउटा चाहना गोर्खाल्याण्ड हो। यसको निम्ति बनेको एकता तोडेर निर्बल बनाएर छुट्टै राज्यको आवाजलाई दबाउनु राज्यसत्ताको कुटनीति रहेको छ। छेत्रीले त भाषा दिवसको दिन आफूहरूले टाँसेको पोष्टर प्रशासनले च्यातेको आरोप पनि लगाएका छन्।